ပရိုမိုးရှင်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ပရိုမိုးရှင်း, coupon code, လျှော့စျေး, hot offer ~
12% အထူးကမ်းလှမ်းမှုကိုကို item ~ os88 အဘို့အချွတ်
ဇွန်လ 10, 2015 admin ရဲ့ 0
ကူပွန်ကုဒ် : os88 OS Brand အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်. ပိုမိုကောင်းသောထုတ်ကုန်များမကြာမီဖြန့်ချိလိမ့်မည်. အကျဉ်းချုပ်: 12% သာ OS ®အဘို့အချွတ် […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Xiaomi Hongmi Note mobile phone（white）.The event starting […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Sony Ericsson Vivaz U5i mobile phone（Mei red）.The […]
ယခုနှစ် OS ကို-STORE ကြီးတွေပြန်အဆုံး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အဟောင်းဖောက်သည်ကျေးဇူးတင်နိုင်ရန်အတွက်, the companycut prices of Sony Xperia ZR C5502 M36h（pink）.The event […]
HD Graphics မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Nokia က စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု OS ကို-STORE စီပီယူ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Samsung က HTC က Software များ ပရိုဆက်ဆာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Technology_Internet processor ​​ကို ဥပဒေရေးရာအနက် နည်းပညာ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် 64-နည်းနည်းက Windows device ကိုမော်ဒယ်
Intel က Server ကို Samsung က စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ processor ​​ကို မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က ဥပဒေရေးရာအနက် ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် 64-နည်းနည်းက Windows Qualcomm မှ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု HD Graphics HTC က Sony Ericsson က ပရိုဆက်ဆာ device ကိုမော်ဒယ် နည်းပညာ စမတ်ဖုန်းများ Software များ Technology_Internet Intel က OS ကို-STORE စီပီယူ Samsung ရဲ့ Galaxy စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု